संसारभरीका सबै मानिस शाकाहारी भए के होला ? यस्ता छन् केहि असर - ज्ञानविज्ञान
संसारभरी जून १२ तारिखका दिन विश्व मासु मुक्त दिवस मनाइन्छ । यदि संसारभरीका सबै मानिस अचानक सधैंका लागि शाकाहारीका भए यसको असर के होला ?
यहाँ हामी यसले जलवायु, वातावरण, स्वास्थ्य र अर्थव्यवस्थामाथि पार्ने असर बारे कुराकानी गर्दैछौं ।
यदि सन् २०१५ सम्म पूरा संसार शाकाहारी भए हरेक वर्ष ७० लाख कम मृत्यु हुनेछ र यदि पशुसँग जोडिएका उत्पादन खाँदै नखाए हरेक वर्ष ८० लाख कम मानिसको मृत्यु हुन्छ ।
अक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल फ्युचर अफ फूड प्रोग्रामका एक अनुसन्धानकर्ता मार्को स्प्रिंगम्यानका अनुसार खाद्य सामग्रीसँग जोडिएका उत्र्सजनमा ६० प्रतिशतको गिरावट आउनेछ । यो रातो मासुबाट मुक्तिका कारण हुनेछ किनभने रातो मासु मिथेन ग्याँस उत्सर्जित गर्ने पशुबाट पाइन्छ ।
यद्यपी, यसले विकाशशील दुनियाँमा किसानलाई नराम्रोसँग प्रभावित पार्नेछ । सुख्खा र अर्ध सुख्खा इलाका पशुपालनका लागि प्रयोग गरिन्छ । अफ्रिकामा सहारा नजिकै एक ‘सहेल ल्याण्ड’ छ र त्यहाँ बस्ने मानिसहरु पशुपालनमा निर्भर हुन्छन् । उनीहरु स्थायी रुपमा कुनै अर्को ठाउँमा विस्थापित हुन बाध्य हुनेछन् । यसले उनीहरुको सांस्कृतिक पहिचान खतरामा पर्ने गर्दछ ।
घाँसेमैदान बारे पुनर्विचार गनुपर्ने हुन्छ । जंगल जलवायु परिवर्तनबाट कम प्रभावित हुनेछ । लोपोन्मुख जैविक विविधता पुनः फिर्ता हुनेछन् । जंगलमा एक प्रकारको संतुलन स्थापित हुनेछ । शाकाहारीले पशुलाई बचाउनका लागि पहिले हिंस्रक जनावर मारिदिन्थे ।
जो पशुसँग जोडिएका उद्योगमा लागेका छन् उनीहरुले आफ्नो नयाँ ठेगाना र करियरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरु कृषि, बायोऊर्जा तर्फ उन्मुख हुन सक्छन् । यदि उनीहरुले अर्को रोजगार पाएनन् भने मानिसहरु ठूलै संख्यामा बेरोजगार हुनेछन् र यसले पारम्परिक समाजमा भारी उथलपुथलको स्थिती हुनेछ ।
केही अवस्थामा यसको जैविक विविधतामा नराम्रो असर पर्ने गर्दछ ।
संसारका सबै मानिस शाकाहारी भए क्रिसमस टर्की (एक प्रकारको पंक्षी) हुने छैन । शाकाहारी हुनुको अर्थ यो हो कि परम्परा नराम्रो तरिकाले प्रभावित हुनेछ । संसारभरी यस्ता थुप्रै समूदाय छन् जो विवाह र उत्सवमा मासु उपहार दिन्छन् ।
मासुको खपत नहुँदा मुटु रोग, मधुमेह, स्ट्रोक र कुनै प्रकारको क्यान्सरको आशंका हुँदैन । यस्तोमा संसारभरीका दुई वा तीन प्रतिशत जीडीपी जुन मेडिकल बिलमा खर्च हुन्छ त्यो बच्नेछ । तर पोषणका केही विकल्प नतोकी मासुलाई हटाउनु हुँदैन । एक अनुमानका अनुसार संसारभरीका दुई अर्ब मानिसहरु कुपोषित छन् ।
अहिले चिकित्सककहाँ पुग्नुभयो भने, तपाईंको मेनुबाट थुप्रैथरी खानेकुरा कटौती हुनेछ । त्यसमा खसीको मासु, बोइलर कुखुरा पनि हुनसक्छ । चिल्लो, पिरो, अमिलो त छँदैछ।
मासुजन्य पदार्थ शरीरले सजिलै पाचाउन सक्दैन । यसले शरीरमा अनेक रोग जन्माउँछ । जबकी शाकाहारी भएमा स्वस्थ रहने, उर्जावान हुने, रोगहरु लाग्ने सम्भावना कम हुने, आत्मग्लानी नहुने बताइन्छ ।
तर, शाकाहारी हुँदैमा पूर्ण स्वस्थ्य भइन्छ त ?
के माछामासु नखाँदैमा स्वस्थ्य, तन्दुरुस्त, जवान भइन्छ ? यसबारे भने मन्थन गर्नु जरुरी छ । खासमा शाकाहारी भएमा त्यसले केहि बेफाइदा पनि गर्छ । त्यसैले तपाई शाकाहारी बन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने अरुको लहैलहैमा लागेर होइन दृढ भएर मात्रै निर्णय गर्नुहोस् ।
यदि तपाई अझै पनि शाकाहारी हुने बारेमा सोच्नुभएको छ भने तपाईले पहिले यसको नकरात्मक पक्षहरुलाई बुझ्न आवश्यक छ । जसले पछि तपाई शाकाहारी बन्नुभयो भने त्यस्ता समस्याको प्रतिरक्षा गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
त्यसैले हचुवाको भरमा कुनै निर्णय नगरी यसको बारेमा सबैकुरा थाहा भएपछि मात्रै निर्णय लिनुहोला ।
सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा मानिस शाकाहारी बन्ने मुख्य कारणको बारेमा कुरा गर्दा स्वास्थ्य समस्या अग्रस्थानमा आँउछ । धेरै मानिस आफु स्वस्थ हुने विश्वासमा लागि शाकाहारी बन्ने गर्छन् ।
शाकाहारी बनेमा यसले पाचनप्रणालीमा सुधार गर्छ र उर्जा बढाउँछ भन्ने उनीहरुको बुझाइ रहेको छ । यो सही पनि हो । तर, खानपानको सन्तुलन मिलाइएन भने, तो प्रत्युत्तपादक बन्न सक्छ । कतिपय अध्ययनहरुले भने शाकाहारी बन्नुकोे फाइदा भन्दा बेफाइदा धेरै हुने कुरा बताउँछ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण शाकाहारी मानिसले मांसाहारी मानिसले भन्दा कम प्रोटिन खाने गर्छन् । यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो किनभने हामीलाई हाम्रो खानामा धेरै प्रोटिन आवश्यक हुन्छ । प्रोटिनले हाम्रो शरीरको ब्लकहरु बनाउँछ र जब हामी माछामासु खान्छौं त्यसले मासुलाई हाम्रो शरीरको मांसपेसी बनाउन गर्न प्रयोग गर्छ ।
तपाईले माछामासुको सट्टामा अण्डाबाट दुधबाट र सागसब्जीबाट पनि प्रोटिन पाउनुहुन्छ । गेडागुडी, ब्रोकाउली र सोयाबिनमा पनि प्रोटिन पाइन्छ तर, त्यसमा पाइने प्रोटिन मासुमा पाइने भन्दा धेरै पातलो हुन्छ ।
त्यस्तै सागसब्जी र अरु खानेकुरामा पाइने प्रोटिनमा माछामासुमा पाइने जति एमिनो एसिड हुँदैन । हाम्रो शरीरले अन्य खानेकुरामा पाइने प्रोटिनलाई मासुमा पाइने प्रोटिन जस्तो राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्दैन ।
हामीले माछामासुबाट प्रोटिनमात्रै पाउँदैनौं । माछामासु तेल र फ्याटहरुको पनि धेरै ठूलो स्रोत हो । हामीलाई खानामा फ्याट घटाउनको लागि सँधै भन्ने गरिन्छ तर हामीलाई खानामा केहि मात्रामा फ्याटको आवश्यकता हुन्छ ।
फ्याट हाम्रो छाला, कपाल र हड्डीको लागि मात्रै आवश्यक नभइ यसले बिरामीबाट बचाउन र प्रोटिन उपयोग गर्न सक्छ । आवश्यक फ्याटी एसिड, जस्तै ओमेगा ३ ले फ्याटी एसिड हाम्रो मस्तिस्कको कार्यसम्पादनको लागि पनि आवश्यक छ र क्यान्सर हुने सम्भवना कम गछ । हामीले फ्याटी एसिड मुख्यगरि माछाबाट पाउन सक्छौं ।
३. भिटामिन बL १२
हामीले माछामासुबाट भिटामिन बि१२ पनि पाउँछौं । यो नै भिटामिन बि१२ को राम्रो स्रोत हो । त्यसैले शाकाहारी हुनाको बेफाइदाहरुलाई बेवास्ता नगर्नुहोस् ।
भिटामिन बि१२ वास्तवमै एक महत्वपूण पदार्थ हो र यसको कमीले नशा खराब हुने, उर्जा कम हुने र क्याल्सियमको उपयोगमा समस्या हुन्छ जसले ओस्टियोपोरोसिस जस्ता गम्भिर समस्या देखिन सक्छन् ।
बि१२ मस्तिस्कको समस्याको लागि पनि धेरै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले हाम्रो मस्तिस्कको उचित कार्यसम्पादनको लागि हामी सर्वहारी हुनुपर्ने केही सिद्धान्तहरुले बताएका छन् । तपाईले बि१२ लाई अन्य फोर्टिफाइड स्रोतहरुबाट पाउनुहुन्छ तर, यो प्राकृतिक रुपमा पाइने जस्तो राम्रो हुँदैन ।
स्वास्थ सम्बन्धि समस्याहरुबाहेक अन्य केही कुराहरु पनि छन् जसकारण शाकाहारी मानिसहरुले पनि शाकाहारी हुन भन्दा सर्वहारी हुन ठिक भनेर स्विकार गर्ने गर्छन् ।
यदि तपाई आफ्नो साथीको घर जानुभयो भने उनीहरुले तपाईको लागि छुट्टै खाना बनाउन पर्छ । तपाईलाई मिठो शाकाहारी खाना खुवाउन उनीहरुले बाहिरबाट विशेष खानेकुराहरु लिएर आउनुपर्छ जसले तपाईलाई मैले गर्दा उनीहरुलाई गाह्रो भयो जस्तो लाग्न सक्छ ।
त्यसैगरि तपाईले बाहिरको रेष्टुरेन्टमा खाना खान जानुभयो भने पनि तपाईले मेनुमा थोरै मात्रै शाकाहारी खानाहरु पाउन सक्नुहुन्छ ।
त्यसैले सिद्धान्त अनुसार शाकाहारी बन्नु भन्नाले तपाईले आफ्नो खानामा सुधार गरेर विभिन्न खाले फास्टफुड खान छोड्ने र थोरै मात्रै स्याचुरेटेड फ्याट प्राप्त गर्ने हो ।
तर, व्यवहारमा तपाई भोकाएको हुनुहुन्छ र खानाको रुपमा माछामासु मात्रै उपलब्ध छ भने पनि मासुको एक टुक्रा खान सक्नुहुन्न । बरु, तपाईले सागसब्जीबाट बनेका केहि खानुपर्छ ।
तपाईले कि्रस्पहरु र बटर राखिएको रोटी पाउनुहुन्छ जुन अस्वस्थ हुनसक्छ । त्यसैगरि तपाईले लामो यात्रा गर्दा धेरै थरि खानेकुरा पाउनुहुन्न र पाइहाल्नुभयो भने पनि मासुजन्य पदार्थ भन्दा स्वस्थ खालको खानेकुरा पाउनुहुन्न ।
शाकाहारी भएमा तपाईले धेरै खानाहरुको स्वाद र धेरै अनुभवहरु छुटाउनुहुन्छ । त्यसैले पनि होला पछि शाकाहारी बनेका धेरैजसो मानिसहरुले मासुको स्वादलाई याद गर्ने बताउँछन् ।
जब तपाईका सबै साथीहरु मासुका विभिन्न परिकारहरु खाइरहेका हुन्छन तपाई भने सलाद खान बाध्य हुनुहुन्छ । त्यतिमात्रै होइन तपाई मिठाईहरु पनि खान पाउनुहुन्न किनभने विभिन्न मिठाइहरुमा त्यसलाई लामो समयसम्म टिकाइ राख्न जनावरको बोसो प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
त्यसैगरि अन्य विभिन्न खानेकुराहरुमा पनि स्वादको लागि जनावरको बोसो प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले धेरैजसो शाकाहारीहरुले थाहै नपाइ मासुजन्य पदार्थबाट बनेका परिकार खाइरहेका हुन्छन् ।
Don't Miss it धेरै नखानुहोस् यस्ता प्रकारका खाना, नभए चाँडै नै खुइलिन्छ तालु
Up Next सावधान ! धेरै फ्रुट जुस पिउदा यस्ता हानी
अपुरो निन्द्राले हाम्रो स्वास्थ्यमा डरलाग्दा रोगहरु निम्त्याउछ थाहा नभए एकचोटि पढ्नुहोस्
के तपाई पर्याप्त निन्द्राबाट बञ्चित हुनुहुन्छ ? मध्यरातमा बिउँझेर चिन्तित मुद्रामा घडीको सुईले टिक–टिक गरेको हेरेर बस्नुभएको छ ? तपाईंलाई…
महका २१ फाइदाहरु, यस्ता छन्
महमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन बी र सी, आइरन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, पोटासियम, फस्फोरस, सोडियमजस्ता तत्व पाइन्छन्, जुन शरीरका लागि ज्यादै लाभदायक…
रक्तअल्पता हुने कारण र यसबाट बच्ने उपायहरु जानिराखाैँ
शरीरमा भिटामिन बी १२, फोलिक एसिड तथा आइरनले रगतको निर्माण गर्दछ । यी तत्व खानाबाट पाइन्छ । खानपान सही नहुदाँ…
तल उल्लेख कुराहरुलाई ध्यान दिनाले सधै तन्दुरुस्त रहन मध्त पुग्छ
१. धेरै मान्छेले दाँत माझ्नलाई थोरै समय दिन्छन्, फ्लस गर्दैनन् र दन्तचिकित्सककहाँ नियमित रूपमा जाँदैनन् । कलम समातेजस्तै गरी टुथब्रस…
बैबाहिक जीवन सफल बनाउन यसो गर्नुस्
– कहिले कहिं रमाइलो गरौं, मनोरञ्जन गरौ । सिनेमा हेर्ने, घुमफिर गर्ने, पुस्तक पढ्ने गरौं । यसले दाम्पत्य सम्बन्ध थप…
खानेकुरा कसरी, कहिले र कति खाने जनिराखौ
खानाको सम्बन्ध भोकसँग मात्र छैन । खाना त्यस्तो स्रोत हो, जसबाट शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्व प्राप्त हुन्छ | हाम्रो शरीरलाई…